Cover Faces » အောက်တိုဘာအလှပန်း – ပိုးအိဖြူဇင်	24
Mr. MarGa says: ပုံမပေါ်သေးဝူးး
စာပဲဖတ်သွားတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီ says: အဆက်အပေါက်လေး လှမဲ့ သဘောရှိ..
alinsett says: အနော့် အပေါက်လား.. မမဂျီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီ says: ငင်?
alinsett says: သိပါဘူးဗျာ…
Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: ရန်ကုန်ဘူတာကြီးလားကွယ် အနောက်က အဆောက်အဦးက။
kai says: ဒီတောကဦးကြီး.. စွတ်တင်နေပါပြီ..။
အဲဒီ.. သဘောတရားကို.. နားလည်ထားရင်..မြန်မာ့ တိုးရစ်ဇင်အလုပ်တွေ..ဖွံ့ဖြိုးပြီး.. တနှစ်လူ၁၀သန်းလောက်လာလည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်.. ထင်..။ မှတ်ချက်။ ။ လူ၁၀သန်း.. တယောက်ဒေါ်လာ ၂ထောင်ဖိုး.. မြန်မာပြည်ထဲသုံးသွားရင်.. မြန်မာပြည်ဝင်ငွေ ၂ဘီလီယန်.. အလုပ်အကိုင်.. မီလီယန်ချီတိုးတယ်လို့သာ ယူဆကြစေလို…။
ဇီဇီ says: သများတော့ လာမနောက်နဲ့။
စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ အဟွတ်!! ရှက်ရှက်နဲ့ တစ်ခု ပြောရရင်….
alinsett says: သဂျီး…
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအထိ.. ရှိတုန်းပဲ… ဒါ့ပုံတောင် ရှိတယ်..။
sorrow says: ….အဲဒီ.. သဘောတရားကို.. နားလည်ထားရင်..မြန်မာ့ တိုးရစ်ဇင်အလုပ်တွေ..ဖွံ့ဖြိုးပြီး.. …တနှစ်လူ၁၀သန်းလောက်လာလည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်.. ထင်..။ …အဲ့တခုထဲမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် သူကြီးရယ်…. ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထက်ဈေးမြင့်နေပြီး …၀န်ဆောင်မှု မပြည့်တဲ့ …..ဟိုတယ်တွေရယ် .. ချာတူးလန် …အချိန်မမှန်ဈေးကြီးတဲ့ … ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေ.( ရန်ကုန်ဘန်ကောက် သွားပြန် ..Nok Air ။ ..အဲအေးရှား ဒေါ်လာကိုးဆယ် မှ တစ်ရာခန့်…) ( ရန်ကုန်မန်းလေး တစ်ကြောင်း ..အဲပုဂံ ဒေါ်လာ 120 ) ..ရှုံ့ချည်နှပ်ချည်လုပ်နေတဲ့ လူဝင်မှု …ဥပဒေတွေရယ်…
kai says: ဒီလိုပဲ.. ချိန်ဆ..ညှိမျှရင်း.. အလုပ်ကသင်သွားမယ်ထင်ပါ့…။
တိုးရစ်ဇင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ.. မပြုတ်ရေးချရယ်တဲ့မှ.. မပြုတ်…။ Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: ..နောက်တခု….စကားအတင်းစပ်…မြန့်ကျန့်လေဆိပ်တွေ …တစ်နှစ်ဆယ်သန်းလက်ခံနိုင်မယ့် ဆားဗစ်ကက်ပက်စတီ..
sorrow says: ….http://burma.irrawaddy.org/business/2014/09/27/65266.html ..အဟိဟိ ..ကျော်ပဲမယုံသလားဆိုတော့ ..ဘူမှလဲမယုံ…သက်သေလေးတွေ့လို့ မလာတာ ..
ခင် ခ says: တမင်တကာ တလွဲ မန့်ကြည့်တာပါ
pooch says: မြို့တော်ခန်းမထင်တာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အောက်က ပြောနေတုန်း တင်လိုက်တော့ကွန်းမန့် ၂ ခုဦးသွားပြီ ဟီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ကြုံလို့.. အဲဒီမြို့တော်ခန်းမရဲ့.. လင်န်းစကိတ်ပြင်တဲ့သူကို.. ပြောချင်တာက.. ဒီလိုအဆောက်အဦးမှာ.. သူ့ဂုဏ်ရှိပြီးသားကို.. အပေါ်ထိုးထောင်ထွက်လာမယ့်.. အုံးပင်လိုလို. အပင်တွေစိုက်ပြီးကွယ်အောင်လုပ်ထားတာကတော့.. တော်တော်ကို.. မသိသားဆိုးလှတယ်လို့…။ မှတ်ချက်။ ။ အရင်စစ်အစိုးရတုံးကလို.. အဲဒီတိုက်အပေါ်ကနေ.. အောက်ကလူထုကို.. ဓာတ်ပုံချောင်းရိုက်.. သေနတ်နဲ့ချောင်းပစ်မှာမို့..(တမင်ကို) အမြင် ကွယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလည်း. တမျိုးပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်နှင့် ပေါင်တိုစတိုင်က သိပ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ငါ လွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ ခုလို အရမ်းဟော့ဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ဖို့ ခေတ်မီအမြင်ရှိဖို့လို့ ပြောမယ်ထင်မိပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက.. ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းရဲ့.. အပြင်အဆင်.. အ၀တ်အစား..စတိုင်လ်တွေကို.. မဝေဖန်ပါဘူး..။
kyeemite says: .ဂွတ်…ပုံလှလှလေးလည်းကြည့်ရင်း…တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးတာတွေလည်းဖတ်ရတာပေါ့
.ကပ်ကျော်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
မြစပဲရိုး says: ပြောရရင်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မြန်မာပြည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်စေချင်ရင်
Crystalline says: ဟိုအင်န်ဝိုင်မှာလုပ်တဲ့ 3M ပွဲရောသတင်းစာထဲမထည့်ဘူးလား…သများအမျိုးတွေပါတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အဲဒါ.. အဲဒီလုပ်တဲ့သူတွေကို ပရက်စ်ရလိစ်တောင်းထားတာ.. မရသေး..